Waa Tan Sababta Ilhan Cumar Aan Dib Loogu Dooran Doonin | Xaqiiqonews
Waa Tan Sababta Ilhan Cumar Aan Dib Loogu Dooran Doonin
Madaxeeda Daboolan iyo Afkaarteeda ka dhanka ah Yahuudda uma aysan diidin in ay ka mid noqoto Congres-ka Mareykanka, hase yeeshee xilli doorashada 2020 waxaa jira dhowr sabab oo Ilhaan aysan u soo laaban karin.
Marwo Ilhan waa gabar la qabo, marka la fiiryo Shareecada Islaamka Ilhan fasax uma heysta in Mr Tim Mynette ay la jiifato, arintaasi ma ahan wax weyn marka loo fiiriyo qaanuunka Mareykanka, balse Ilhan waa in ay xisaabta ku darsataa Soomaalida iyo Muslimka oo ahaa taageerayaasheeda ugu badan marnaba ma aqbalin fikradda “Khiyaanada guurka”.
Bishii Oktoobar Wargeyska Daily Mail ayaa sheegay in sheekada Ilhan IYo Tim ay dhaaftay Shukaansi, islamarkaana ay yihiin dad u nool si wadjir ah.
Daily Mail waxa ay baahiyeen Sawirada IlhanCumar oo ka soo dageysa Dhismaha islamarkaana fuuleysa baabuurka Mynette .
Marka loo hadlo si daacadnimo lagan fogaado eeedeyn caadifadeed qaabka dabeysha ilhaan ay ku socoto marna ma farxad gelin taageerayaasheeda Oo hadda ku fikirayaa un in ay Ilhan kaga cad goostaan codeynta 2020.
Sidoo Kale Aqri Arin ay Khasab Tahay In Aad Ka Ogaato Ilhan Cumar